ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအကြံပေးချက် sarcoidosis လူနာတုပ်ကွေးနှင့်အဆုတ်ရောင်ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းပိုမိုနားလည်ကူညီပေးဖို့ SarcoidosisUK သူနာပြုများကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်များကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ဒီဖြစ်ပျက်စေရန်သော်လည်းကောင်းရှိသည်ဖို့ရှိမရှိပေါ်တွင်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအကြောင်းကြားကူညီပေးပါမည်။ သငျသညျ, ကာကွယ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်အမှန်ပင်သငျသညျရှိစေခြင်းငှါအခြားမည်သည့်မေးခွန်းများကို ပတ်သက်. SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုဖို့ကျေးဇူးပြုပြီးစကားပြောဆိုလိုပါလျှင် ထိတွေ့ရ.
အဲဒီမှာဒီနှစ်သုံးတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးမရရှိနိုင်ပေမယ် sarcoidosis ရှိသူများရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုနေသောခေါင်းစဉ်:
အဆိုပါ adjuvanted trivalent တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး (Ativ) ။ ဒါဟာ 65 နှစ်နှင့်ကျော်အသက်ကလူများအတွက်လိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Quadrivalent ကာကွယ်ဆေး (QIV) ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေရှည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ (လက်တွေ့အန္တရာယ်အုပ်စုကို) ၏တုပ်ကွေးကနေတိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာနေသောအသက်ထက်နည်း 65 နှစ်မှ 18 နှစ်ကနေ2နှစ်အထိနှင့်လူကြီးများအတွက်6လကနေအသက်သားသမီးတို့အဘို့အကြံပြုသည်။
သငျသညျမမှန်ပြီးနောက်အနည်းငယ်ခံစားရပေမည်ဖြစ်သော်လည်းတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုး, ကာကွယ်ဆေးထိုးအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်သင်သည်တုပ်ကွေးကိုမပေးနိုငျသညျ။ ဤသည်ကိုသူတို့ထိုကဲ့သို့သော prednisolone အဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဖိနှိပ်မှုဆေးယူပြီးနေသောလူနာများအတွက်သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ထို့ပြင်ကာကွယ်ဆေးယေဘုယျအားဖြင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းခြင်းနှင့်ပိုမိုများပါတယ်ကြသူလူများကဒီအုပ်စုအကြံပြုသည်:
အောက်ပါလူများ NHS အပေါ်တာဝန်ခံအခမဲ့တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးပူဇော်ကြသည်:
နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ, နှလုံး, အသည်း, ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အာရုံကြောရောဂါ (လက်တွေ့အန္တရာယ်အုပ်စုကို) နဲ့ဘယ်သူမဆို။
သို့သော် sarcoidosis ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပါသည်နှင့်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် သေချာပေါက်တစ်ဦးလက်တွေ့အန္တရာယ်အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်။ ထို့အပြင်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးရရှိမှုဗြိတိန်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသည်။ ထိုကြောင့်သင်သည်သင့်မိသားစုဆရာဝန်ကနေတုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးထိုးတောင်းဆိုရန်ရှိစေခြင်းငှါ။ သူသို့မဟုတ်သူမသည်၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးလက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်စေနှင့်ကသင့်ရဲ့မှတ်စုအပေါ်ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
NHS လမ်းညွှန်မှုကိုဖတ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး။
Sarcoidosis လူနာလည်း Pneumococcal (PCV) ရောဂါကူးစက်မှုဆန့်ကျင်တဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးသွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောအချိန်ကာကွယ်ဆေးထိုးဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောအဆုတ်ရောင်သောရောဂါများဆန့်ကျင်သငျသညျကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးလိုပဲ pneumococcal ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းအသက် 65 ကျော်အသက်မည်သူမဆိုမှစံအဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှင့်အများအားဖြင့်ရေရှည်နာတာရှည်အခြေအနေများနှင့်အတူလူနာကမ်းလှမ်းနေသည်။ သို့သော် sarcoidosis ရှားပါးရောဂါဖြစ်ပါသည်နှင့်ဖြစ်ပါသည် မဟုတ် သေချာပေါက်ရေရှည်နာတာရှည်အခွအေနေအဖြစ်ခွဲခြား။ ထိုကြောင့်သင်သည်သင့်မိသားစုဆရာဝန်ကနေ pneumococcal ကာကွယ်ဆေးထိုးတောင်းဆိုရန်ရှိစေခြင်းငှါ.
အဆိုပါ pneumococcal ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး NHS လမ်းညွှန်မှုကိုဖတ်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အဆိုပါ SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှုထိခိုက်မည်သူမဆိုအခမဲ့, အရည်အသွေးထောက်ခံမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတည်ရှိ။